ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာဟာ တကယ်ရောမှန်ကန်ရဲ့လား? – Trend.com.mm
ပြောင်းလဲတာ ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားသူတွေကိုမပြောင်းလဲပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ပြောင်းလဲပါတဲ့။ကိုယ်တွေက တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ၊အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားနေလေ့ရှိပါတယ်။ပြောင်းလဲလာမလားဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာက တကယ်ရော အကျိုးရှိလို့လား၊ကောင်းမွန်လို့လားစဉ်းစားကြည့်ပါ။အထူးသဖြင့်စုံတွဲတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ဆီမှာရှိနေတဲ့အမူအကျင့်တစ်ချို့ကိုမကြိုက်လို့ပြောင်းလဲဖို့ပြောကြတယ်။ဖိအားပေးကြတယ်။သူတို့တကယ်ရော ပြောင်းလဲရဲ့လား? တစ်ချို့တစ်ဝက်ကတော့ ချစ်တဲ့စိတ်ကြီးမားလို့ သူ့အတွက်ငါကြိုးစားပြင်မဟဲ့ဆိုပြီး ပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့်တော့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာဟာ သူတို့ကိုပိုဆိုးလာစေတာပါတဲ့။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်…
တစ်ခါတစ်လေ သဘောထားသေးသိမ်တဲ့သူတွေဆိုရင် သူတို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ ပြောင်းလဲဖုိ့ပြောပေမဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ငါ့ကိုဆရာကြီးလာလုပ်ရမလား၊
ငါလုပ်နေတာ ဘာမှမမှားဘူး။ငါ့ကိုလာပြီးလွှမ်းမိုးချင်နေတယ်စသဖြင့်တွေးနေ တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျ သူတို့က ပိုပြီးအရွဲ့တိုက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါက
သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေတာပါပဲ။
တစ်ချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကိုချစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့ မပြောင်းလဲချင်ကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ရှေ့မှာတစ်မျိုး၊ကွယ်ရာတစ်မျိုးလုပ်လာကြတယ်။ဥပမာ ကိုယ့်ချစ်သူရှေ့မှာတော့ ဆေးလိပ်မသောက်တာ၊အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ညာပြောတာစသဖြင့်၊မိန်းကလေးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ချစ်သူမကြိုက်ဘူးပြောထားတဲ့အရာကိုသူ့ရှေ့မှာတော့မလုပ်၊ ကွယ်ရာကျမှလုပ်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုရှေ့မှာတော့ဟန်ဆောင်နေပြီးနောက်ကွယ်မှာလုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေတဲ့အခါ ချစ်သူကပြန်သိသွားရင်နှစ်ယောက်လုံးအတွက် မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာလည်းလိမ်ညာခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းလဲပစ်လို့မရသလို ပြောင်းလဲချင်တဲ့စိတ်ရှိမှဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒါကို ဘေးကနေတတွတ်တွတ်ပြောနေမယ်၊
မပြင်ရကောင်းလားဆိုပြီး စကားစပ်မိတိုင်းပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ Relationship ကြီးက စိတ်ညစ်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ဘယ်သူကမှနားပူမခံချင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအခါကျတော့ တွေ့ရင်လည်းဒါတွေပဲထပ်ပြောနေမှာပဲဆိုပြီးချိန်းရင်မအားဘူးလို့အကြောင်းပြချက်တွေမျိုးစုံပေးပြီးရှောင်နေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ တစ်ချက်တစ်ချက် တော့ပြန်ပေါ်လာစမြဲပါပဲ။ဒေါင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ကျီးပုံပြင်လိုပေါ့။ အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါသင့်ရဲ့စိတ်ကိုပိုပြီးနာကျင်စေပါတယ်။ နားလည်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။နားမလည်ပေးနိုင်တဲ့အခါ ငါဘယ်လောက်ပြောပြော
အပြတ်အပြတ်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုသလို သင့်ဘက်က သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ကိုပြောင်းလဲဖုိ့ အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးလာတဲ့အခါစိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာတတ် ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျ သင့်ဘေးနားမှာရှိနေချင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်ရှိကြပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲကိုယ်က ကောင်းစေချင်လို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို ကိုယ်လိုသလိုဆေးသွားခြယ်လို့မရပါဘူး။ဒါကို မေ့နေရင်တော့ သင်ပဲနာကျင်ခံစားရမှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ချစ်သူဆီက အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ချင်နေတာ တကယ်ရောသူ့အတွက်လား?သင်ကိုယ်
တိုင်အတွက်မဟုတ်ဘူးလား?သင်နဲ့အတူ ဘ၀ကိုလက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှာကောင်းဖို့၊သင့်မိဘတွေအမြင်မှာကောင်းဖို့၊ဆွေမျိုးတွေရဲ့ 
အပြောအဆိုမခံရဖို့၊အထင်ကြီးခံရဖို့ သင့်ချစ်သူမှာရှိတဲ့ သင်မကြိုက်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ ကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်နေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လား? ဒါက အတ္တကြီးခြင်းတစ်မျိုး
ပါပဲ။ကိုယ်ပျော်ရွှင်ရဖို့ တစ်ခြားသူရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာ မမျှတပါဘူး။သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲစေချင်ရင် သူမကြိုက်တဲ့
တစ်ခြားသူကိုပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သူက သင့်အပေါ်တကယ် ချစ်ရင်ကြိုးစားပြီး ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိပြီးရိုးမြေကျပေါင်းဖက်သွား
ကြတဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာထက် တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တစ်ယောက်က ပြောပြပြီးနှစ်ယောက်စလုံး ပြင်ဆင်ကြိုးစားသွားကြတာပါ။
ပွောငျးလဲတာ ကောငျးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တဈခွားသူတှကေိုမပွောငျးလဲပါနဲ့။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ ပွောငျးလဲပါတဲ့။ကိုယျတှကေ တဈခွားသူတဈယောကျရဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှေ၊အကငျြ့စရိုကျတှကေို ပွောငျးလဲပဈဖို့ အကွိမျပေါငျးမြားစှာကွိုးစားနလေရှေိ့ပါတယျ။ပွောငျးလဲလာမလားဆိုတဲ့ စိတျတှနေဲ့ပေါ့။ဒါပမေဲ့ တဈခွားသူတဈျယောကျကို ပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားနတောက တကယျရော အကြိုးရှိလို့လား၊ကောငျးမှနျလို့လားစဉျးစားကွညျ့ပါ။အထူးသဖွငျ့စုံတှဲတှမှော ကိုယျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျောဆီမှာရှိနတေဲ့အမူအကငျြ့တဈခြို့ကိုမကွိုကျလို့ပွောငျးလဲဖို့ပွောကွတယျ။ဖိအားပေးကွတယျ။သူတို့တကယျရော ပွောငျးလဲရဲ့လား? တဈခြို့တဈဝကျကတော့ ခဈြတဲ့စိတျကွီးမားလို့ သူ့အတှကျငါကွိုးစားပွငျမဟဲ့ဆိုပွီး ပွောငျးလဲသှားတာတှရှေိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မြားသောအားဖွငျ့တော့ တဈခွားသူတဈယောကျကိုပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားနတောဟာ သူတို့ကိုပိုဆိုးလာစတောပါတဲ့။ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုရငျ…
တဈခါတဈလေ သဘောထားသေးသိမျတဲ့သူတှဆေိုရငျ သူတို့ကိုကောငျးစခေငျြလို့ ပွောငျးလဲဖို့ပွောပမေဲ့ သူတို့ရဲ့စိတျထဲမှာတော့ ငါ့ကိုဆရာကွီးလာလုပျရမလား၊
ငါလုပျနတော ဘာမှမမှားဘူး။ငါ့ကိုလာပွီးလှမျးမိုးခငျြနတေယျစသဖွငျ့တှေးနေ တတျပါတယျ။အဲ့ဒီအခါကြ သူတို့က ပိုပွီးအရှဲ့တိုကျလာတတျပါတယျ။ဒါက
သူတို့ရဲ့ အပွုအမူကို ပိုပွီးဆိုးဝါးစတောပါပဲ။
တဈခြို့ကတြော့လညျး ကိုယျ့ရဲ့ ခဈြသူကိုခဈြတယျ၊ဒါပမေဲ့ မပွောငျးလဲခငျြကွဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ရှမှေ့ာတဈမြိုး၊ကှယျရာတဈမြိုးလုပျလာကွတယျ။ဥပမာ ကိုယျ့ခဈြသူရှမှေ့ာတော့ ဆေးလိပျမသောကျတာ၊အရကျဖွတျလိုကျပွီလို့ညာပွောတာစသဖွငျ့၊မိနျးကလေးဆိုရငျလညျး ကိုယျ့ခဈြသူမကွိုကျဘူးပွောထားတဲ့အရာကိုသူ့ရှမှေ့ာတော့မလုပျ၊ ကှယျရာကမြှလုပျတာမြိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုရှမှေ့ာတော့ဟနျဆောငျနပွေီးနောကျကှယျမှာလုပျခငျြတာကိုလုပျနတေဲ့အခါ ခဈြသူကပွနျသိသှားရငျနှဈယောကျလုံးအတှကျ မကောငျးနိုငျပါဘူး။ ဟနျဆောငျတယျဆိုတာလညျးလိမျညာခွငျးတဈမြိုးပါပဲ။
လူတဈယောကျရဲ့အကငျြ့စရိုကျဆိုတာ လှယျလှယျနဲ့ပွောငျးလဲပဈလို့မရသလို ပွောငျးလဲခငျြတဲ့စိတျရှိမှဖွဈတာပါ။အဲ့ဒါကို ဘေးကနတေတှတျတှတျပွောနမေယျ၊
မပွငျရကောငျးလားဆိုပွီး စကားစပျမိတိုငျးပွောဆိုနမေယျဆိုရငျ သငျတို့ရဲ့ Relationship ကွီးက စိတျညဈစရာကွီးဖွဈနမှောပါ။ဘယျသူကမှနားပူမခံခငျြကွပါဘူး။အဲ့ဒီအခါကတြော့ တှရေ့ငျလညျးဒါတှပေဲထပျပွောနမှောပဲဆိုပွီးခြိနျးရငျမအားဘူးလို့အကွောငျးပွခကျြတှမြေိုးစုံပေးပွီးရှောငျနပေါလိမျ့မယျ။
သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကိုခဈြတဲ့စိတျနဲ့ပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားပမေဲ့ အကငျြ့စရိုကျဆိုတာ တဈခကျြတဈခကျြ တော့ပွနျပျေါလာစမွဲပါပဲ။ဒေါငျးယောငျဆောငျထားတဲ့ကြီးပုံပွငျလိုပေါ့။ အဲ့ဒီလိုပျေါလာတဲ့အခါသငျ့ရဲ့စိတျကိုပိုပွီးနာကငျြစပေါတယျ။ နားလညျပေးနိုငျရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။နားမလညျပေးနိုငျတဲ့အခါ ငါဘယျလောကျပွောပွော
အပွတျအပွတျနဲ့နှာခေါငျးသှေးထှကျဆိုသလို သငျ့ဘကျက သူတို့ရဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှေ ကိုပွောငျးလဲဖို့ အတငျးအကပျြဖိအားပေးလာတဲ့အခါစိတျတှရှေုပျထှေးလာတတျ ပါတယျ။အဲ့ဒီအခါကြ သငျ့ဘေးနားမှာရှိနခေငျြတော့မှာမဟုတျပါဘူး။လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျရှိကွပါတယျ။ဘယျလောကျပဲကိုယျက ကောငျးစခေငျြလို့ပွောတာဖွဈဖွဈ တဈခွားသူတဈယောကျရဲ့ ဘဝကို ကိုယျလိုသလိုဆေးသှားခွယျလို့မရပါဘူး။ဒါကို မနေ့ရေငျတော့ သငျပဲနာကငျြခံစားရမှာပါ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ခဈြသူဆီက အကငျြ့စရိုကျတှကေို ပွောငျးလဲပဈခငျြနတော တကယျရောသူ့အတှကျလား?သငျကိုယျ
တိုငျအတှကျမဟုတျဘူးလား?သငျနဲ့အတူ ဘဝကိုလကျတှဲသှားမယျဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြအမွငျမှာကောငျးဖို့၊သငျ့မိဘတှအေမွငျမှာကောငျးဖို့၊ဆှမြေိုးတှရေဲ့ 
အပွောအဆိုမခံရဖို့၊အထငျကွီးခံရဖို့ သငျ့ခဈြသူမှာရှိတဲ့ သငျမကွိုကျတဲ့အကငျြ့စရိုကျတှေ ကိုပွောငျးလဲပဈခငျြနတောမှ ဟုတျရဲ့လား? ဒါက အတ်တကွီးခွငျးတဈမြိုး
ပါပဲ။ကိုယျပြျောရှငျရဖို့ တဈခွားသူရဲ့ အကငျြျ့စရိုကျတှကေိုပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားနတော မမြှတပါဘူး။သူ့ရဲ့အကငျြ့စရိုကျတှကေိုပွောငျးလဲစခေငျြရငျ သူမကွိုကျတဲ့
တဈခွားသူကိုပွောငျးလဲဖို့မကွိုးစားပါနဲ့။သူက သငျ့အပျေါတကယျ ခဈြရငျကွိုးစားပွီး ပွောငျးလဲလာပါလိမျ့မယျ။ အပွနျအလှနျနားလညျမှုရှိပွီးရိုးမွကေပြေါငျးဖကျသှား
ကွတဲ့စုံတှဲတှဆေိုတာ တဈယောကျကိုတဈယောကျပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားနတောထကျ တဈယောကျရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို တဈယောကျက ပွောပွပွီးနှဈယောကျစလုံး ပွငျဆငျကွိုးစားသှားကွတာပါ။